Abathwali befashoni ye-Instagram Qhubeka nokuKhokela ngohlobo lwabo
Iinjongo ze-Leggie: Ukujonga emva ekuJongeni iiNdawo esazithandayo kwiiCelebs zaseAfrika kunye neSitayile seNkwenkwezi kwiveki ephelileyo
Kule veki iphelileyo, ezinye zeenkcenkce ezibalaseleyo kunye neenkwenkwezi zesitayile e-Afrika zaphuma kuluhlu oluhle, olufanelekileyo olujongwa liqela abathi, ewe, babelane ngalo kwi-Instagram. Isitayile saseGhana esiyi-superstar kunye nomdlali weqonga, UZynnell Zuh, waqala kwiveki yakhe enxibe isinxibo esinokusishiya sixoxa ukuba yayiyinto entle na, le nto iyimifanekiso emnandi okanye intle. Imilenze yakhe kwaye yongeza iphaphu lokukhanya kwilanga phantse le-monochrome yayili-icing kwikhekhe. Kufuneka songeze ukuba isingxobo sokuprintwa kwesilwanyana sasiyinto entle yokumangalisa.
Ngapha eNigeria, ukubhiyozela usuku lokuzalwa kwakhe, umphathi wezinwele ezilungileyo u-LTD I-Chioma Ikokwu Usinike i-Avant-garde en blanc vibe njengoko wayecofa kwijezi yengxelo awayeypeyinta nebhulukhwe ye-lacy kunye ne-tube exutd tube ephezulu.
Ukusuka kwezemidlalo ukuya ku-edgy, bekukho nesitayile esifanelekileyo serve ukuba sigqithe kumantombazana amnyama eMzantsi Afrika!
Angelo Obasi I-Chioma Ikokwu UGrace Motswana Isitayile se-Instagram Iinkwenkwezi zesitayile se-Instagram UJuliet Ibrahim UJulitha Kabete Palesa Mahlaba USara Langa Toke Makinwa Zoe Msutwana UZynnell Zuh